पुरुषहरु यी कारण अविवाहित भन्दा विवाहित युवती तर्फ आकर्षित हुन्छन - सुदूर नेपाल
पुरुषहरु यी कारण अविवाहित भन्दा विवाहित युवती तर्फ आकर्षित हुन्छन
Dinesh khaptadi August 7, 2019 0
आजकल यस्ता कयौं उदाहारणहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । जहाँ धेरै युवा विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । हालसालै भएको एक अनुसन्धानका अनुसार यो तथ्यलाई पनि पुष्टि गरेको छ । शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ? युवाले विवाहित महिलालाई किन डेट गर्ने इच्छा राख्छन् ? त्यसका केही कारण यहाँ उल्लखे गरिएको छ ।
आत्मविश्वास विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा उनीहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । पुरुषहरुलाई विवाहित महिलाले हरेक समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ।हेरचाह विवाह गरेका महिलाले विवाह नगरेकाको तुनलामा पार्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् । विवाह पछि उनीहरुलाई सधै आफ्नो घर परिवारको चिन्ता हुने गर्छ । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ ।
हर्मोनमा आएको परिवर्तन विवाह पछि महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ ।स्वभाव विवाह गरेकी युवतीले घर र घर बाहिरको सबै व्यवहारलाई सही ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सक्छिन् । यसका साथसाथै उनले आफ्ना पीडाहरुलाई लुकाएर पनि मिठो मुस्कान प्रदर्शन गर्न सक्छिन् ।शारीरिक सम्पर्क विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष शारीरिक सम्पर्क रहेको छ । सम्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।
Previous Post: पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्युबारे स्थलगत अनुगमन,यस्तो खुलासा गरे(हेर्नुहोस भिडियो)
Next Post: बिहान उठ्ने बित्तिकै पिउने गर्नुहोस पानी , हुन्छन यस्ता फाईदाहरु